Homeसमाचारधनवान बनाउने सपना, तपाईंको सपनासँग मिल्यो हेर्नुहोस्
December 6, 2020 admin समाचार 8949
हरेक ब्यक्तिले निदाएको बेला सपना देख्ने गर्दछन् । धार्मीक मान्यता अनुसार हर सपनाको केहि न केहि अर्थ रहने गर्दछ । यस प्रकारका सपनाले ब्यक्तिको जीवनमा घट्ने घटनाको अग्रीम जानकारी गराउने मान्यता छ । यस्ता सपनामा देखियो बस्तु वा स्थानले मानिसमा सकारात्मक वा नकारात्मक दुबै प्रकारका असर पार्ने गर्दछ ।
कतिपय सपनाले मा’निसमा धनलाभको समेत सं’केत गर्दछ । कुन कुन सपनाले मा’निसलाई धनवान् बनाउने सं’कते गर्छ त ? यदि सपनामा कसैले बिरालो, उल्लु र घोडा देख्यो भने ती ब्यक्ति उपर माता लक्ष्मीको कृपा ब’र्सिने मान्यता छ ।
यदि सपनामा आफुले घो’डसवारी गरेको देखियो भने आगामी भाग लिएको प्रति’योगितामा स’फलता पाउने मान्यता छ । सपनामा घोडा चढेको देखेमा रोकिएको पैसा छिट्टै फिर्ता हुने मान्य’ता रहेको छ । सपनामा माता लक्ष्मी वा भवानी’को दर्शन गरेको देखेमा छिट्टै धन’वर्षा हुने मान्यता छ ।
यदि सप’नामा कसैले आभूषण धार’ण गरेको वा खरीद गरेको देखे भविष्यमा अधिक धन’वान हुने संकेत गर्दछ । यदि सपनामा कमलको फूल धारण गरेको देखे या अरुले फुल भेट गरेको देखे थालेको काममा अपार स’फलता प्राप्त हुनेछ । यदि स’पनामा साना उमेरमा बालिका देखे देवीश’क्तिको विशेष कृपा हुनेछ ।
कसैले सप’नामा मन्दिरको दर्शन गरेको देखे त्यो अत्य’न्त शुभ मानिन्छ । यदि सपनामा मन्दिर देखेमा आउने समय निकै शुभ हुनेछ भन्ने संकेत मानिन्छ । सपनामा कुलदे:वताको दर्शन गरेको देखेमा जीव’नमा विद्यमान सबै कष्ट, सं’कट नाश भएर जाने मान्यता छ ।-खबर हबबाट
January 31, 2021 admin समाचार 6678
September 26, 2021 admin समाचार 4541
October 1, 2020 admin समाचार 13705
आफु’लाई सामाजिक अभि’यन्ताका रुपमा चिनाउने पुण्य गौतम सामाजिक स’ञ्जालमा छाइरहने नाम हो । उनी कुनै न कुनै विषयमा सामाजिक स’ञ्जालमा छाइरहन्छन् । कहिले नि’तान्त ब्यक्तिगत र पा’रिवारिक विषयमा धारणा सा’र्वजनिक गर्छन भने कहिले सामाजिक विषयमा
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (243663)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (229187)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (228200)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (227586)